Namichi Niwu Yoorkitti konkoolaataan balaa qaqabsiise shororkeessummaan himatame - BBC News Afaan Oromoo
Namichi Niwu Yoorkitti konkoolaataan balaa qaqabsiise shororkeessummaan himatame
Goodayyaa suuraa Shakkamaan kun maqaan isaa Sayfuuloo Saaypoov ta'u isaa fi suuraan kun bara 2016 keessa ka'uu isaa miidiyaan Ameerikaatu adda baaseera.
Magaalaa Niwu Yoork keessatti konkoolaataan namoota sadeet ajjeesuun abbootii alangaa Ameerikaan kan himatame.
Nama umurii 29 Saayfuloo Sayipooy, meeshaa fi qabeenyaan gartuu Islaamik State (IS) jedhamu gargaarteetta jedhamuunnis yakkameera.
Bakka balaa kana qaqqabsiisetti rasaasa poolisiin rukkutamuun erga to'anna jala oole booda gara hospitaalatti geeffamee yaalameera.
Namni kun mirga of yakku dhiisuu utuu qabuu ofii isaatiin waan godhe bilisa ta'uun himeera jedhu abbootiin alangaa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp tiwiitarii isaanii irratti, seerri du'aan adabamuu hafeera yoo ta'eyyuu, namni kun du'an adabamuutu irra jira jedhaniiru.
Balaan kun Kibxata waaree booda kan qaqqabe irraangadee Manhaatan daandii biskileetii fi namoonni miilaan irra deeman irra konkoolaataa oofuun namoota ajjeesuun ture.
Namoonni ja'a bakkuma sanatti kan du'an yeroo ta'u namoonni lama ammoo hospitaalatti du'ani. Namoota miidhaan irra gahe 12 keessa namoonni sagal ammayyu hospitaalatti argamu.
Waraqaan mana murtii akka jedhutti:
Haleellaan kun ji'a lama dura karoorfamee.
Guyyaa 'Haaloween' namoonni karaa irra waan baay'ataniif jecha guyyaa kana akka filate dubbateera.
Konkoolaata isaa irratti alaabaa IS hidhuuf ture garu akka qalbii namaa hin hanneef jecha dhiisuuf murteessu dubbateera.
Angaawwonni fakkii fi barreefama holola IS qabu 90 bilbila isaa keessa arganiiru.
Hololli IS kun akka isa kakaase, keessattu ajjeechaa Iraaq keessatti ta'e ilaalchisuun haasaan hogganaan IS Abu Bakar al-Baghaadii na onnachiseera jedha.
''Sirritti qajeelfama duuka-buutota IS kan hordofe fakkaata. Akkamitti haleellaa akkanaa raawwachuun akka danda'amu ajaja IS sirriitti hordofuu isaa koomiishinarri itti aanaa Poolisii Joon Miileer gazexeessitootatti himaniiru.
Lammii Uzibeek kan biraa haleellaa kana ilaallatee gaafiif barbaadama ture argachuu isaaniis, FBI beeksiisaniiru.
Shakkamaan kun eenyuu?
Saayfuloo Sayipooy utuu gara Pateerson, Niwu Jeersiitti hin dhufin dura Taampaa, Filooriidaa keessa jiraataa akka ture himama.
Bara 2010 keessa Uzibekistaan irraa gara Ameerikaa kan dhufe wayita ta'u jiraata seera qabeessa. Dhabbanni uber konkoolachisaa ta'uun akka isaaniif hojjechaa ture ni dubbatu.
Goodayyaa suuraa Saayfiloo, namichi rasaasaan rukkutamuun qabame kun, Whiilcheeriin irra taa'uun gara mana murteetti dhihaate.
Namni kun angaawoota Ameerikaa fi FBI keessatti gartuu farra-shororkeessummaan namoota shakkaman waliin quunnamtii qaba jedhame akka beekamu maddi oduu CBS jedhamu dhaabbata tikaa biyyattii waabeffachuun gabaaseera.
Akka maddi kun jedhutti, namni kun namoota finxaleeyyii waliin qunnamti hanga tokko akka qabuu mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee namoonni qorataman kun Ameerikaa jiraachuu isaanii fi Ameerikaa ala jiraachuun isaanii waanti ifa godhame hin jiru.
''Pirezidaantiin Uzibeekistaan Shaaykaat Miziyooyeey, Pirezidaantii Ameeriikaa Doonaald Tiraampitti akka himanitti, haleella kanaa ilaalchisee qorannaa irratti gargaarsa gochuuf biyyi isaanii qophiidha jidhaniiru.
Deebiin isaa maal ture?
Niwu Yoork bakka buufata geejjibaa hundatti poolisii dabalataa kan bobbaafte yeroo ta'u Maaratoonii Dilbata dhufu magaalattii keessatti gaggeefamuu ilaalchisees nagaa eegdota wayyaa poolisii hin keewwannes dabalataan ni bobbaafamu jedhameera.
Pireezidaant Tiraamp, daayiversitii lootarii yookan DV hambisuu irratti hojjechuu akka jalqaban beeksisaniiru. Namni shakkaman kun kan inni ittiin gara Ameerikaa dhufe carraa akkanaatiin ture.
Itti dabaluunis sirna haqaa biyyattii kan qeeqan pireezidant Tiraamp, shakkamaa kana gara mana hidhaa waraana Guntanaamoo Beey, Kuuba keessatti argamuutti erguu akka malan dubataniiru.
''Sirna adabbii gadhee amma argataa jiru irra kan caaluu fi kan ariifatu akka rgatu godhu fiduu qabnas,'' jedhaniiru.
Kantiibaan Niwu Yoorkii fi Bulchaan naannoo Niwu Yoork lamaanuu dandamannaa jiraattoonni agarsiisan leellisuun - balaa namoota saddeet ajjeese kana akka ''hin siyaasessine'' ykn hiika biroo akka hin laanneef yaadachiisaniiru.
Akkamiin haleellaan kun rawwatamuu danda'ee?
Namni kun damee daldala Hoome Depoot jedhamu kan Niwu Jeersii keessatti argamu irra Kibxata waare booda konkolaata kiraa fudhachuun ture kan gara Niwu Yoork dhufe, jedha poolisiin.
Xiyyeefannaan isaas namoota biskileetii fi miilaan deemaan irratti gochuun konkoolaataa saffisa guddaan oofuun itti qajeele.
Konkolaatichi erga awutoobisii mana baruumsaa waliin walitti bu'ee booda, meeshaa waraanaa harkatti qabachuun konkoolaata keessa gadi-bu'ee.
Haala kana naannoo sanatti kan argaman poolisoota magaalaa Niwu Yoork keessa kan umurii 28, Ryaan Naash jedhamuun itti dhukkafamuun madaa'ee meeshaa waraana qawwee lamaa fi cuphewwan waliin to'anno jala ooluu danda'eera.
Haleellaan akkana kun erga bara 2001, al-Qaa'idaan xiyyaara dirqisiisuun Giddu Galeessa Daldala Adduunyaa jedhamuun kan beekaman gamoo gurguudda lameen niwu Yoork keessatti argamuutti rukuutuun gara namoota 3,000 ta'an ajjefamanii as kun isa jalqabaati.
Haleellaa Niwu Yoork: namni konkolaata guddaa oofaa ture tokko namoota saddeet ajjeesse